Zvese zvinobatanidzwa mukuvakwa kwepurazi remhepo | Green Renewables
Zvese zvinobatanidzwa mukuvakwa kwepurazi remhepo
Wakamboona here eolico Park funcionando. Turbines emhepo uye ayo mashizha achifamba uye achiburitsa simba. Nekudaro, mushure mezvese izvi, pane kudzidza kukuru kwemhepo, nzvimbo yemhepo turbines, simba rinodiwa, nezvimwe. Mune ino posvo tichaenda kuona nhanho nhanho zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuvakwa kwepurazi remhepo.
Iwe unoda here kudzidza zvese izvo simba remhepo rinogadzira?
1 Kuyera kwemhepo
2 Kuyera kwenzvimbo
3 Kuverengwa kwekuita kwepaki
4 Chikamu pamberi pekuvakwa kwepurazi remhepo
5 Kuvaka zvinhu
6 Ndeapi mabasa ekuchengetedza ayo purazi remhepo rine?
Zviripachena tiri kutaura nezvazvo mhepo ine simba, saka chakakosha chekutanga kudzidza icho zvinoitwa zviri pamhepo. Izvo zvinodikanwa kuti uzive hutongi hwemhepo hunovhuvhuta munzvimbo inovakwa purazi remhepo. Izvo hazvina kukosha chete kuti uzive mhando yemhepo iriko, asi kumhanya kwainoita nemhepo uye kuwanda kwayo.
Nguva dzinoshandiswa kuyera mhepo dzinosiyana zvichienderana nezvinangwa zveprojekti. Zviyero zvinowanzo kuyera gore rimwe. Nenzira iyi ivo vanodzivisa kusava nechokwadi kwekusayera chimwe chikamu chegore uye nekudaro vane chivimbo chakanyanya mune data.
Kuyera mhepo unoda timu yakadzidziswa. Iyo yakaiswa pakukwirira kwakasiyana kuti uzive mamwe ma parameter ane yakakura kukura. Iwo anonyanya kuyerwa zvinzvimbo ndiwo blade tip, midrange, uye hub kukwirira. Nemapoinzi matatu aya, kukosha kwemhepo kwakanyanya uye kunobatsira pakuvaka purazi remhepo. Kana tambo dzekuyeresa uye mast zvange zvagadzirwa, iwo mageji anoiswa. Inowanzo shandiswa kuyera akasiyana akadai semidziyo anemometers, hygrometers, vanes, thermometers uye barometers.
Iwe unofanirwa kufunga nezve huwandu hwese hunogona kuve nepurazi remhepo, zvichienderana nebhajeti iripo. Zvinogoneka kuti tichawana nzvimbo hombe ine hutongi hwemhepo yakanaka iyo ingapa kudzoka kwakanaka kupaki, asi isina mari yakakwana yekuita basa. Naizvozvo, zvakakosha ziva kukura kwenzvimbo dzakarongwa chirongwa chekuvaka cheprojekti, iyo iripo nzvimbo, hunhu hwenzvimbo uye topography uye zvimwe zvingangodaro mhando dzemhepo turbines iwe yaungadai waisa.
Zvichienderana nemiparamende iyi, isu tinofanirwa kuseta nzvimbo dzinoiswa masts. Mukuvakwa kwepurazi remhepo, mupangamazano akasarudzika anofanirwa kuve aripo. Izvi zvinodaro nekuti zvakakosha kuti utsanangure zvakanaka iko nzvimbo yemasts uye kumisikidza kwavo.
Kuisa mari muchikepe chinotibatsira kuyera zviwanikwa zvemhepo zvatiinazvo mudanho rekutanga reprojekti. Uye zvakare, iwe unoda kuti izvi zviyero zvive zvinoenderana nemirau uye zviyero zviripo pasi rese.
Sezvo dhata iri kuyerwa mukati megore rose, zvakakosha kuti uchengete nzira yakanaka yezviyero. Kunyangwe kana iyo mast ikaiswa zvinoenderana nematanho, panogona kuve nerumwe rudzi rwechinetso chinoda kugadziriswa. Kana dambudziko risina kugadziriswa nekukurumidza, isu tichava nenguva nezviyero zvisirizvo zvinotungamira mukukanganisa.
Kuverengwa kwekuita kwepaki
Kuverenga kana iyo purazi yemhepo ichave nekuita kwakakosha zvakanyanya. Naizvozvo, zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kutariswa. Imwe yacho chiyero chaicho chemidziyo yemhepo panguva yemushandirapamwe.
Kamwe iyo yekuyera mushandirapamwe wapedzwa, dhatabhesi inowanikwa kuti ishande pairi. Iwe unogona kufungidzira iro rezita simba iro iro paki ichave iine, hunhu hwemhepo turbines, topography yenyika, nezvimwe. Kugoverwa kwakanyatsogadziriswa kunogona kuitwawo pane data rakawanikwa kuti uverenge kugadzirwa kwepurazi remhepo. Nedatha idzi iwe unogona kuziva mashandiro ayo anozove nawo kana akakodzera mabasa apera.
Kuita kwacho kwakatarwa panguva ino haifunge nezvekurasikirwa kwemagetsi kwakabatana nekuiswa kwekubatsira. Munguva yekushandiswa kwepaki, dzimwe nguva matambudziko anomuka anoderedza mashandiro. Zvisinei, izvi hazvigone kufanotaurwa. Izvo hazvigone kuverengerwa kuti kangani uye kangani pachave nematambudziko anotungamira kudzikira kwekuita.
Chikamu pamberi pekuvakwa kwepurazi remhepo
Muchikamu pamberi pekuvakwa kwepurazi remhepo, zvakafanira kuzivisa mamiriro emusika maererano neFinancing neMitengo (CAPEX). Semuenzaniso, mabasa einjiniya anoda kuraswa anofanira kuve nekunzwisisa kuri nani saiti. Uye zvakare, kune mhinduro dzehunyanzvi mune zveinjiniya nyaya uye dzimwe njodzi dzinosangana nekusaziva izvo zvinofanirwa kuongororwa. Idzi data dzese dzinoonekwa mukudyara kwekupedzisira kwepurazi remhepo.
Kuziva zvakadzama mukana wekubudirira kwepurazi remhepo, zvakakosha kuti uzive rondedzero yemamiriro ekuchinja akasiyana. Pakati pezvakasiyana izvi tinowana mamiriro egeological uye geotechnical, zvakatipoteredza, zviri pamutemo pamwe nenharaunda. Izvo zvakare zvinokwanisika kuongorora kuwanikwa kune iyo mhepo purazi, zvese nepasi uye nezviteshi, uye kuziva mamiriro ekupinda enetiweki.
Naizvozvo, zvakakosha kuti uite ese aya marudzi ekutsvaga uye kuongorora basa. Hazvina kufanana kuvaka pane yakajairika terrain pane saiti ine kazhinji chiitiko chekudengenyeka kwenyika.
Paunenge uchiita kuvakwa kwepaki, pane misiyano yekutarisa zvichienderana nesimba. Uye zvakare, zvinoenderana nekuti ivhu kana nzvimbo dzine matombo uye saizi yemhepo turbines.
Basa rekutanga rakaitwa nderevanhu (mapuratifomu, nheyo nemigwagwa). Iri basa rinowanzo kutora pakati pemwedzi mina ne4. Ipapo zvivakwa zvekubatanidza kunetiweki zvinotanga. Ichi chikamu chinowanzotora nguva yakareba zvichienderana nekuoma kwacho. Vanowanzo tora pakati pemwedzi mitanhatu ne6. Chekupedzisira, seyemabasa eruzhinji anotanga kupedzisa, maturbine emhepo anounzwa nekuunganidzwa. Zvichienderana nesaizi yavo uye saizi yepaki, zvinotora pakati pemwedzi gumi nembiri kusvika makumi maviri nemana.
Kuti tizive huwandu hwesimba revanhu ratinoda, isu tinofanirwa kuziva kukura kwepaki zvakanaka. Imwe ine makumi matatu emagetsi emagetsi inogona kuvakwa nevanhu mazana matatu nemakumi matatu. Kana uchingova nemhepo turbines mashanu, iwe unongoda chete vanhu makumi mashanu.
Ndeapi mabasa ekuchengetedza ayo purazi remhepo rine?
Sezvo purazi remhepo risingabatanidzi chete emagetsi emhepo, kuchengetedza kweese kuiswa kunodiwa. Basa rekuchengetedza uye yavo inosanganisirwa mitengo inoenderana nesaizi yepaki uye dhizaini yezvivakwa. Iyo yepamusoro mhando mudanho rekuvaka, yakadzika mitengo yekugadzirisa.
Kuve nereferenzi, purazi remhepo rinosvika makumi matatu-30 mhepo turbines Inogona kuchengetedzwa nevanhu vatanhatu (vaviri pamhepo turbine), mumwe 6 kune vatanhatu vanhu vanopihwa kutsigira semi-pagore kugadzirisa, maneja manejimendi, uye mumwe kana vaviri vanhu vanopihwa mashandiro eiyo inogadzira chirimwa.
Neruzivo urwu, ndinovimba unodzidza zvese zvaunoda pamusoro pemapurazi emhepo uye nebasa ravanoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remhepo » Zvese zvinobatanidzwa mukuvakwa kwepurazi remhepo
Dr. Luis Monzon akadaro
Zuva rakanaka. Yakawanda sei ivhu inodiwa kune 100 MW mhepo turbine?
Pindura Dr. Luis Monzon
Darci dal akapfeka akadaro
Ndine zviyero, ndinoda zano nehukama kuti ndirambe ndichienderera nemhepo purojekiti
Pindura kuna Darci dal ponte
Tsanangudzo, kushandiswa uye kuyerwa kwesimba recalorific yegesi
Mamwe masimba aunofanira kuziva